Xasan Guure Jaamac, Aragti Iyo Mowqif Ba Nin Tiisa Suntaday Buu Ahaa W/Q Rashiid Sheekh Cabdillaahi
Friday May 22, 2020 - 07:21:52 in Wararka by Wariye Tiriko
Ibraahim Xaaji Muuse Wacays oo ka mid ah saaxiibbada aanu isku jaal ku ahayn halgankii SNM iyo ka hor ba, ayaa, 16kii Meey sannadkan 2020ka, goor habeennimo ah oo ay saacaddu ahayd labadii iyo toddoba iyo afartan daqiiqo, telefoonka i gu la soo hadlay. Geeridii Xasan Guure Jaamac buu ii sheegay. Waxa uu yidhi gurigiisa ayay geeridu ugu timid oo haddaas laga soo hadlay. Waxa uu ku daray in uu Xasan u dhintay xanuunka Koroonaha(Covid-19). Xaalad bay ahayd aannaan intaas wax ka badan isa sii odhan karin. Naxdin baan kacaa-fadhiistay. Haddana runta ayaan nafta u sheegay. Waa tii Alle oo waa lama-seegaan; hase ahaatee, magaalada Hargeysa, in Xasan Guure iyo kuwo la mid ahi ba, guryaha ku dhimanayaan, waxa ay tilmaamaysaa xaaladda dalku ku sugan yahay. Xasan Guure Jaamac ka allaysay adduunkan, Alle ha u dembi dhaafo oo qabriga nuur iyo neecow janno ha uga yeelo; waxaa se uu ka tegay xusuus iyo raad wax laga kororsan karo.Isbarashadayadu, aniga iyo Xasan Guure, waxa ay ka soo bilaabantay xagaagii 1969kii. Aniga oo Qaahira ka imid oo fasaxii Jaamacadda ku imid, baannu ku kulanay guri uu adeerkay Maxamuud Xaaji Axmed Guuleed(Alle ha u naxariisto), ka degganaa magaalada Hargeysa. Adeerkay Maxamuud, waxa uu ahaa nin uu Xasan Guure, si macallinnimo iyo si saaxiibnimo ah labada ba u gu xidhnaa oo uu aad u qaddarin jiray; geeridiisii debadeed na uu in badan hadal hayn jiray. Waxa aannu waagaas ahayn dhallinyaro isku ayni ah oo isafgarashadoodu dhowdahay; sidaas darteed jaal baannu noqonnay. Intaas ka dib se, waannu kala baadnay. Kudhawaad saddex bilood ka dib, waxa aan ku noqday Qaahira. Sannadkii 1984kii, buu iigu yimid magaalada Addis Ababa, halkaas oo aan ka ahaa xilhayaha Xafiiska ururka Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed (SNM). Maalintaas iyo ka dib baannu, Alle ha u naxariisto ee Xasan Guure, jabad, jid iyo jidiin ba wadaagnay; qof ahaantiisa na kolkan baan sii bartay.